" ရေမွန်ရဲ့၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အလှူလေးပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်'' - Cele Gabar
Home/Cele News/” ရေမွန်ရဲ့၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အလှူလေးပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်”
” ရေမွန်ရဲ့၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အလှူလေးပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ရေမွန်ကတော့ အသည်းအသန်အားပေးခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။အခုဆိုရင် ဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ၂၃ရက်နေ့ကတော့ သူ့ရဲ့ ၅လပြည့်တဲ့နေ့ပါ။ ဒါ့အပြင်လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့ကတော့ ရေမွန်ရဲ့ ၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့် ရေမွန်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနယ်မြို့တမြို့မှာအလှူလေးပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကို မိခင်ဖြစ်သူ ​ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ကပြောပြလာတာပါ။
“ဒီနေ့ တွတ်ပီလေး ဆုံးပါးသွားတာ၅လတင်းတင်းပြည့်ပြီ.ဒီလ 26 th ကလဲ တွတ်ပီ 33 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မို့ သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြားလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ကြံရွယ်ထားတာသူကလဲ(တဆင့်ကြားခံနဲ့) နယ်(အဖိုးအဖွားဆွေမျိုးများရဲ့ဇာတိ)မှာလှူပေးဖို့သေချာမှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေမကောင်းလို့ရက်‌နဲနဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်(အိမ်ကဘုရားလဲဘုရားပါဘဲလို့အကန်တွေပြောပြီး blame မလုပ်ကြနဲ့နော်!စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီးနားလည်လို့ မသွားသေးတာ.အသက်ကိုဉာဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်နေတာ)(စိတ်ရင်းအတိုင်းဆို..အိမ်ဘုရားတင်မက နယ်မြို့‌လေးကမပြည့်စုံတဲ့ဘုရားစေတီတွေ၊နွမ်းပါးချို့တဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေ၊သံဃာတွေကိုတပိုင်တနိုင်လှူဒါန်းထောက်ပံ့ချင်စိတ်လေးနဲ့သွားချင်တာပါ။
Post တစ်ချို့တွေမှာလို ဘုရားဖူးအကြောင်းပြဖလန်းဖလန်းထပြီးအပျော်ကျူးဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိ ! နကိုကလဲအဲ့လိုမနေခဲ့ဖူးပါ.တွတ်ပီမရှိတော့ထဲကအပျော်ဆိုတာလဲ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့. .သေသူကလဲတောင်းဆိုထားတယ်သေသူတွေမပြုလုပ်နိင်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှူတွေကို ဆက်လက်ရှင်သန်နေသူတွေကရည်စူးပြီး လှူဒါန်းလုပ်ကိုင်ပေးရမှာလေ !!!ဒါကြောင့်. .ဘာလုပ်လုပ်အပြစ်မြင်တတ်တဲ့အကန်စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ ကျေးဇူးပြု၍လာ blame မလုပ်ကြပါနဲ့နော် ! လုပ်ရင်လဲ ဂရုမစိုက်ပါဘူးကုသိုလ်ကြားထဲ ဒေါသမရောစွက်ချင်လို့ပါ)ဒါကြောင့်. . .ဒီနေ့တော့ နေအိမ်ဘုရားမှာဘဲဆွမ်း၊ပန်း၊ဆီမီး၊ရေချမ်းကပ်လှူပြီးသူ့အတွက် ဆုတောင်းအမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.အားလုံးလဲ အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ”ဆိုကာ ရှင်းပြခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ရေမွန်ရဲ့၅လပြည့်မှာအောက်မေ​့သတိရမိတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါဦးနော်။
Source- Khin Myat Mon
” ေရမြန္ရဲ႕၃၃ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလႉအျဖစ္ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕မွာ အလႉေလးျပဳလုပ္မယ့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပလာတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ျမတ္မြန္”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ေရမြန္ကေတာ့ အသည္းအသန္အားေပးခဲ့ရတဲ့အဆိုေတာ္တစ္ဦးပါ။အခုဆိုရင္ ဆုံးပါးသြားခဲ့တာ ဒီေန႔ႏိုဝင္ဘာလ၂၃ရက္ေန႔ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ၅လျပည့္တဲ့ေန႔ပါ။ ဒါ့အျပင္လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၆ရက္ေန႔ကေတာ့ ေရမြန္ရဲ႕ ၃၃ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရမြန္ရဲ႕ဆႏၵအတိုင္းနယ္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕မွာအလႉေလးျပဳလုပ္မယ့္အေၾကာင္းကို မိခင္ျဖစ္သူ ​ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ကေျပာျပလာတာပါ။
“ဒီေန႔ တြတ္ပီေလး ဆုံးပါးသြားတာ၅လတင္းတင္းျပည့္ၿပီ.ဒီလ 26 th ကလဲ တြတ္ပီ 33 ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မို႔ သူ႔အတြက္ ထူးထူးျခားျခားေလးကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳဖို႔ႀကံ႐ြယ္ထားတာသူကလဲ(တဆင့္ၾကားခံနဲ႔) နယ္(အဖိုးအဖြားေဆြမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ဇာတိ)မွာလႉေပးဖို႔ေသခ်ာမွာထားတယ္ဒါေပမဲ့ အေျခအေနေတြမေကာင္းလို႔ရက္‌နဲနဲေ႐ႊ႕လိုက္ပါတယ္(အိမ္ကဘုရားလဲဘုရားပါဘဲလို႔အကန္ေတြေျပာၿပီး blame မလုပ္ၾကနဲ႔ေနာ္!စဥ္းစားဆင္ျခင္တုံတရားရွိၿပီးနားလည္လို႔ မသြားေသးတာ.အသက္ကိုဉာဏ္နဲ႔ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ)(စိတ္ရင္းအတိုင္းဆို..အိမ္ဘုရားတင္မက နယ္ၿမိဳ႕‌ေလးကမျပည့္စုံတဲ့ဘုရားေစတီေတြ၊ႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊သံဃာေတြကိုတပိုင္တႏိုင္လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ခ်င္စိတ္ေလးနဲ႔သြားခ်င္တာပါ။
Post တစ္ခ်ိဳ႕ေတြမွာလို ဘုရားဖူးအေၾကာင္းျပဖလန္းဖလန္းထၿပီးအေပ်ာ္က်ဴးဖို႔အစီအစဥ္လုံးဝမရွိ ! နကိုကလဲအဲ့လိုမေနခဲ့ဖူးပါ.တြတ္ပီမရွိေတာ့ထဲကအေပ်ာ္ဆိုတာလဲ ကိုယ္နဲ႔မသက္ဆိုင္ေတာ့ပါဘူးဒါေပမဲ့. .ေသသူကလဲေတာင္းဆိုထားတယ္ေသသူေတြမျပဳလုပ္နိင္ေတာ့တဲ့ကုသိုလ္ေကာင္းမႉေတြကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသူေတြကရည္စူးၿပီး လႉဒါန္းလုပ္ကိုင္ေပးရမွာေလ !!!ဒါေၾကာင့္. .ဘာလုပ္လုပ္အျပစ္ျမင္တတ္တဲ့အကန္စိတ္တစ္ခုထဲနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍လာ blame မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေနာ္ ! လုပ္ရင္လဲ ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူးကုသိုလ္ၾကားထဲ ေဒါသမေရာစြက္ခ်င္လို႔ပါ)ဒါေၾကာင့္. . .ဒီေန႔ေတာ့ ေနအိမ္ဘုရားမွာဘဲဆြမ္း၊ပန္း၊ဆီမီး၊ေရခ်မ္းကပ္လႉၿပီးသူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းအမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္.အားလုံးလဲ အမွ်ရၾက၍ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ”ဆိုကာ ရွင္းျပခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ေရမြန္ရဲ႕၅လျပည့္မွာေအာက္ေမ​့သတိရမိတယ္ဆိုရင္တစ္ခုခုေျပာခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous “သူမဖေဖေရဲ့မွေး​ေန့ရက်မြတ်လေးမှာ သတိတရနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအပြင် သူမလေးစားချစ်ခက်ရတဲ့ hreo က ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ”
Next ” ရွှေစာရံရွာဘက်သို့​ ကြာဇံကြော်နဲ့အတူ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကစားစရာအရုပ်တွေပါ ယူဆောင်ကာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေနွယ်ထွန်း”